Ururada Dhalinyarada Gaalkacyo oo sheegay in ay qaadeen Khadkii cagaarnaa ee magaaladaas – SBC
Ururada Dhalinyarada Gaalkacyo oo sheegay in ay qaadeen Khadkii cagaarnaa ee magaaladaas
Ururada Dhalinyarada Gobolka Mudug ee ka kala jira Labada dhan ee ay ka kala arimiyaan Puntland iyo Galmudug ayaa kulamo ay ku yeesheen magaaladaasi waxa ay kaga dhawaaqeen in ay ku guda jiraan howlaha ku aadan sidii loo qaadi lahaa qadka cagaaran ee kala bara koonfurta gaalkacyo iyo waqooyiga Gaalkacyo.
Kulan Balaaran oo ay dhalinyaradaasi isutagtay Maanta ku yeesheen gudaha goobta loo yaqaan Qadka cagaaran ee magaalada Gaalkacyo waxay ku sheegeen in ay qaadi doonaan qadka cagaran soona celin doonaan isku gudubkii labada dhinac ee magaalada.
Kulamadan ay yeelanayaan Dhalinyarada ayaa ahaa kuwo soo jiitamayay oo dhinacyo badan ay isugu imaanayeen si ay uga tashadaan xaaladaha amaan ee magaalada Gaalkacyo iyo qaadista qadkan Cagaaran, taasi oo ay iminka meel fiican u mareyso sida uu noo xaqiijiyay Khaliif oo ka mid ah Ururadaasi.
Qaar ka mid ah dhalinyaradaas oo la hadlayay xafiiska SBC ee Gaalkacyo ayaa muujiyay in ay ku faraxsanyihiin howlahan ay ku qaadayaan khadka cagaaran iyagoo tilmaamay in haatan waxii ka dambeeya ay qaadeen khadkii cagaarnaa ee kala barayay magaalada Gaalkacyo.
Khadka cagaaran ee Magaalada gaalkacyo waa goob kala barta labada dhinac ee Magaalada gaalkacyo dhanka Waqooyi iyo dhanka Koonfureed waxaana tan iyo intii halkaasi lagu magacaabay Khadka cagaaran aan jirin wax isku gudub ah oo ay sameeynayeen shacabka labada dhinac ee magaalada kala degen .
Isku soo wada duub dhalinyarada ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay waday ol ole ay wax kaga qabanayaan xaaladaha amaan ee magaalada Gaalkacyo taasi oo iyaga iska xilsaaray.
Waxa aan hambalyo kal iyo laab ah u dirayaa dhallinyarada walaalaha ah ee goostay in ay ka gudbaan khadkan shaydaan ee kala xira qoqoba, kala go’doonsha dad ehel iyo qaraabo ah oo isku tol ah, isku diin ah, isku af ah, isku midab ah, isku dal ah, isku dab ah, isku dhib iyo dheef ah, wax kala goyn karaana jirin oo aan ka ahayn doqonnimo iyo dullinnimo.
Waxan dhallinyartaas walaalahyga ah xusuusinayaa in dunidii naga awoodda iyo horumarka iyo dhaqaalaha badnayd ay kala maarmi la’dahay oo ay maalinba maalinta ka dambaysa sii midoobayaan, bal fiirsha United States & United Kingdom sida ay dunida u hoggaamiyaan iyaga oo aan ka tiro badnayn kana hub badnayn, waxa keliya oo ay ku hoggaamiyaan magacaas UNITED ama MIDOWGA.
Dhanka fiirsha Dowladdii adduunka ugu xoogga badnayd ee United Sovieti ama Midowgii Soofiyeeti wixii ku dhacay markii ay qaybsantay, waxa keliya ee ku dhacay waa magacii midowga ayaa meesha ka baxay, ee dad kuma yaraan, hub & Nuclear kuma yaraan, ee waxa keliya ee meesha ka baxay magacaas midnimo.
Haddaba walaalayaal annaga oo masaakiin ah, hal qoys oo ilmo samaale la yiraa wada ah, cadowgeenna aan weliba annagu gacmaheenna iyo dabeecad xumaddeenna ku abuurannayna ciidda ka badanyahay, siday ku dhacdaa inaan jufo-jufo iyo buush-buush u kala googo’no?
Waxa keliya ee na googoynaya waa qabiil oo ah QAB + IIL, waa magacyo ibliis oo aannaan aqoon wax ay yihiin, qolo kasta ama qolo ma dhihi karee koox kasta waxa ay difaacdaa magacyo sida Cali, Ibraahim, Cabdi, Geedow, Dhagaxow, …. oo kooxda geedow haddii cid kale geedow wax ka sheegto ay boqol-boqol u go’ayso, war maxaa noo diiday in qofkii magac qabiil caaya ugu jawaabno sidii reer xamarka CAAY MA MEEL DALOOSHA AYEY IGA GELAYSAA, haddiise aynaan af fiican ku hadlayn maxaa noo diiday in aan ruuxa geedow caayey ugu jawaabno orod oo qabrigi geedow dul tag ee ku dul orri, markaa qofka wax caynayey halkaas ayuu isaga aamusi lahaa, haddii caqliga yari ka sii duulo ee uu qabrigaa dul tagana isaga un baa Harraad iyo Gaajo ku dili lahayd ee waxba kama qaadeen ciid cidlo ah ee meel turudhuubay.
Ugu dambayn odayaashii na na hallige e, dhallinyarta sharafta mudan ee laba nooca kuwii horeyba gumaysigii alle kase-kow nooga badbaadiyey, bal xusuusta walaalayaal ereyadan abwaankii soomaaliyeed ee Axyaawadani 1948 odayaashii berigaas jirey ku lahaa haddii aad xilkiinnii gebteen bay dhallin yartu kaceene ha qasina xornimada iyo quruxdan ay shiddada u soo mareen:
SHUYUUKH HADDII LA WAAYEY, SHUBBAANTU SHAWR BILLAWDAY.
SHURAAKADAAN LA YEESHAY, SHIDDEY KA SOO MAREENE.
NINKII SHAREECADAAHI, SHAQAAQO YUUSAN KEENIN.
ka wada daalaco boggan:
Sidaas darteed walaalaha midaynta Gaalkacyo waxan kula dardaarmayaa in aad hawshaas dhammaysaan aadna u digtoonaataan waayo waxa badan dad ay dhibayso nabaddiinna iyo midnimadiinnu oo xataa hubaal ah in ay ku jiri karaan kuwii ku farxi lahaa.
Maxamed Cabdi Aadan
L/H : magaca kala qoqobaka CAYR